बतास ग्रुपका आनन्दराज बतासमाथी स्टिङ अप्रेसन, यसरी खोले धेरैको सेटिङको पोल ! – Mission Khabar
बतास ग्रुपका आनन्दराज बतासमाथी स्टिङ अप्रेसन, यसरी खोले धेरैको सेटिङको पोल !
मिसन खबर २४ पुष २०७८, शनिबार ०८:०९
काठमाडौं । गुमनाम बसेर राजनीतिक शक्ति आर्जन गरेका बतासमाथी नै हामीले स्टिङ अप्रेसन चलाएका छौँ । किनकि अन्र्तवार्ता नै नदिने र कुनै खण्डन अहिलेसम्म ननिकालेका बतास धेरैका लागि चासोका पात्र हुन । सेतो लामो दारी फुलेका बतास हामीसँग कहिले कड्किन्थे त कहिले मिडियाले आफ्नो सत्कर्म राम्रो काम बारे किन नलेखेको भन्दै गुनासो पोखे ।
हामीलाई दिएका जवाफमा कतै दम्भ त कतै व्यवहारिकता झल्किन्थ्यो
हामीले नारायणहिटी र नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला कब्जा गर्न खोज्नुभएछनी भन्दा उनले जवाफ फर्काए–नारायणहिटी दरबारमा टेन्टर निकाल्यो मैले हाले अनि पाए । धर्मशाला पनि त्यहि हो फिर्ता लैजाओस मलाई चाहिदैन ।
कतिबेला हास्दै त कतिबेला चर्को स्वरमा दम्भका साथ बतास बोलिरहे–प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुई पटक समानुपातिक सांसद अफर गरिसके । तर, म खाँदिन, मलाई चाहिदैन भन्दिए । देउवासँग मेरो सम्बन्ध धेरै नजिक छ । अहिले मिडियामा त सानो न्युज हो । बिचैमा रोकेर हामीले बतासलाई सोध्यौ– आरजु राणालाई एडभाइजर राख्नुभएको रहेछ नी ? पहिला राखिएको थियो बिवाद आएपछि हटाएको हो । यता आरजु राणाले म बतासमा संलग्न छैन भन्दै निकालेको बिज्ञप्तीलाई यो भनाइले खण्डन गरेको छ ।
बतासले भाबुक हुँदै भने–देशका राजनीतिक दलका नेताहरुबाट म पिडित मान्छे हुँ । ओली सरकारबाट बढी फाइदा लिनुभएछ नी भन्ने हाम्रो प्रश्नमा बतासले भने–ओलीको म ज्वाई नाता पर्छ, तर चार वर्षदेखी भेटघाट नै छैन । प्रधानमन्त्री देउवा नजिकै भएकोले बालुवाटारमा उनको आउजाउ भने चलिरहेकै छ । टेण्डर पार्नको लागि विभिन्न सेटिङ गर्नुहुन्छ नि ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा बतासले बढो सानसँग जवाफ दिए–सेटिङ् बिना त केही पनि हुँदैन नी तपाईले मलाई यस्तो प्रश्न पनि सोध्ने, मलाई मात्रै होइन तपाईहरुलाई पनि थाहा छ नी ।
अझ रोचक कुराको पोल बतास आफैले खोले–बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा हेर्नेदेखि किन्ने कुरा भएको थियो, तर आफुलाई भाग्यले बचायो, नत्र भाटभटेनी सुपर मार्केटका मालिक मिनबहादुर गुरुङ भन्दा पहिला मेरै नाम आउने थियो । बतास ग्रुपका अध्यक्ष आनन्दराज बतास हाम्रो कुराकानीका क्रममा पटक–पटक दोहोर्याए मलाई यो सरकारी सम्पत्ति चाहिएन । फिर्ता लिओस न त । मेरो खर्च भएको पैसा तिरिदिओस् । बतासको साँठगाँठ र राजनीतिक पहुँच उनीबाटै पहिलो पटक सार्वजनिक भएको छ, त्यो पनि हाम्रो स्टिङमार्फत ।
आखिर को हुन त बतास ?
मिडियामा खासै बोल्न नरुचाने बतास पोखराका स्थानिय हुन । बतास अर्गनाइजेसन मार्फत दर्जनौ क्षेत्रमा लगानी गरेका बतास एकाएक अर्बौका मालिक कसरी बने अनी आखिर को हुन त आनन्दराज बतास भन्ने प्रश्न सबैको जिज्ञासाको बिषय बनेको छ । उनको बतास अर्गनाइजेसनमा अहिले ११ सय कर्मचारी छन । ताकी उनले यो अवस्थामा आउन २०४१ देखी नै मेहनत भने गरे । सुरुमा २०४१ सालमा नेपाल बैंकबाट ५६ हजार रिण लिएर उनले आफ्नो ब्यवसाय सुरु गरेका हुन । पछी फेरी ७ लाख लोन लिएर होटल आनन्द खोलेका थिए ।
बतास अर्गनाइजेसन र बतास फाउण्डेसनका अध्यक्षसमेत रहेका उद्यमी बतासले आफू १६ वर्ष उमेरको हुँदा धनी बन्नकै लागि व्यवसाय सुरु गरेका थिए । फेन्सी, किराना, पीसीओ लगायतका व्यवसाय पनि उनले गरेका थिए । तर, त्यसबाट मात्र धनी बन्ने आफ्नो सपना पुरा नहुने देखिपछी बतास अर्गनाइजेसन नै बनाएर विभिन्न राजनीतिक दलको साथ र सपोर्ट लिन थाले ।
बतास अर्गनाइजेसन अन्तर्गत दर्जनौ कम्पनी चलाएका बतासले पञ्चमुखी विद्यालय दुलेगौंडा र गण्डकी बोर्डिङ स्कुलमा अध्ययन गरेका थिए । आफुलाई शिवभक्त भनेर दाबी गर्ने बतासले आफुलाई भेट्न पुगेका केहीलाई भागवतगिताको पुस्तक उपहार दिने गरेका छन् ।